Weekly Esports Program (19th to 25th July 2019) – Gaming Noodle
Weekly Esports Program ကိုပြည်တွင်းပြည်ပမှာကျင်းပနေတဲ့တစ်ပါတ်တာ(ဇူလိုင်၁၉ရက်နေ့မှ၂၅ရက်) အတွင်းဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်အတွက်သောကြာနေ့တိုင်းတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
PUBG Mobile မှဦးစီးကျင်းပတဲ့ပထမဆုံးCommunity Battlegrounds လာပါပြီခင်ဗျာ။စုစုပေါင်းUC 100,000 တိတိကိုဆုကြေးအဖြစ်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသင်းပေါင်း၁၆၀အထိပဲလက်ခံမှာမလို့အောက်ပါlink မှာမြန်မြန်စားရင်းပေးသွင်းကျပါစို့ခင်ဗျာ။
PUBG MOBILE မှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တရားဝင်ကျင်းပသွားမယ့် Community Battlegrounds လာပါပြီ။ ဒီပွဲကိုတော့ OPPO Myanmar…
Posted by PUBG MOBILE on Thursday, 18 July 2019
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကြီးမားဆုံးနဲ့ဆုကြေးအများဆုံးPUBG Mobile Tournament ရဲ့Main Event လာပါပြီ။Samsung Galaxy နဲ့Claw Esports တို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့Galaxy Challenge 2019 ကိုတော့လာမယ့်၂၀နဲ့၂၁ရက်နေ့မြန်မာပလာဇာမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့Gaming Noodle အဖွဲ့သားတွေလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအကောင်းဆုံးMobile Legend အသင်း၂၀ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမမှာကျင်းပမယ့်Mandalay Electronic Show and PUBG Mobile Tournament ကတော့ဇူလိုင်၂၆ကနေ၂၈အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုကြေးငွေသိန်း၄၀ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးအသင်းပေါင်း၁၅၀အထိစာရင်းပေသွင်းနိုင်ပါတယ်။အောက်ပါLink မှာမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Mandalay Electronic Show and PUBG Mobile TournamentRegister Here — > https://forms.gle/aHfSp6Yq9nkk6KKM9မန္တလေး…
Posted by Vibrant Esports Entertainment on Wednesday, 17 July 2019
စိန်ဂျွန်းCity Mall ကနေဦးစီးကျင်းပတဲ့Mobile Legends ပြိုင်ပွဲကတော့ပထမဆု၁၀သိန်း၊ဒုတိယဆု၅သိန်း၊တတိယဆု၃သိန်းပေးအပ်မှယဖြစ်ပါတယ်။အသင်းပေါင်း၆၄သင်းသာပါဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးOnline Qualifier ကိုတော့၂၀နဲ့၂၁ရက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး၈သင်းကသာစိန်ဂျွန်းCity Mall မှာကျင်းပမယ့်Final Stage ကို၂၇ရက်နေ့မှာယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။
အားလုံး မေးနေကြတဲ့ ဇူလိုင်လ(၂၇)ရက်နေ့ City Mall မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Mobile Legends ပွဲလေးအကြောင်း ပြောပြမယ်နော်…
Posted by City Mall on Monday, 15 July 2019
MESL ရဲ့Regular Season ကိုတော့ယခုတစ်ပါတ်ပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။Dota2, AOV နဲ့MLBB ဂိမ်းသုံးမျိုးအတွက်Regular Season ကိုလေးပါတ်တိတိယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးWeek2ကိုတော့ဇူလိုင်၁၉,၂၀,၂၁မှာယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။MLBB ပြိုင်ပွဲများတိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုတော့“Myanmar Electronic Sports League” မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Yangon CSGO Network ရဲ့ Premium Tournament Season 1 ကိုတော့ လာမယ့် ၂၀ နဲ့ ၂၁ ရက်တွေမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Prize pool6သိနိးအထိ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Impunity, Blu Gaming, OGN Gaming, Darkside Gaming, Team Fidem, Fox Gaming, Vertical Horizon, Underdog Gaming, Team Illuminati နဲ့ OX Gaming အသင်းတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ Yangon CSGO Network – YCN page နဲ့ X-Gaming Page တို့မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
MESL ရဲ့Regular Season ကိုတော့ယခုတစ်ပါတ်ပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။Dota2, AOV နဲ့MLBB ဂိမ်းသုံးမျိုးအတွက်Regular Season ကိုလေးပါတ်တိတိယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးWeek2ကိုတော့ဇူလိုင်၁၉,၂၀,၂၁မှာယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Dota2 ပြိုင်ပွဲများတိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုတော့“Myanmar Electronic Sports League” မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
MESL ရဲ့Regular Season ကိုတော့ယခုတစ်ပါတ်ပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။Dota2, AOV နဲ့MLBB ဂိမ်းသုံးမျိုးအတွက်Regular Season ကိုလေးပါတ်တိတိယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးWeek2ကိုတော့ဇူလိုင်၁၉,၂၀,၂၁မှာယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။AOV ပြိုင်ပွဲများတိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုတော့“Myanmar Electronic Sports League” မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။_____________________________________________
ဆုကြေးဒေါ်လာ၁၀၀,၀၀၀အထိပေးအပ်မယ့်Dota2 Summit ပြိုင်ပွဲကိုတော့ဇူလိုင်၂၅ရက်နေ့မှစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။Alliance, Complexity, Team Serenity, beastcoast, Pain Gaming, J Storm ၆သင်းပါဝင်ကျမှာဖြစ်ပြီးTI9 ကိုစောင့်မျှော်နေချိန်မှာဖျော်ဖြေမှုပေးစွမ်းနိုင်မယ့်ပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
When it rains, it pours. July is the month of DOTA! #DotaSummit 10 is really happening July 25 to 28.
Posted by BeyondTheSummitTV on Friday,5July 2019
ဇူလိုင်၁၈ကနေ၂၁ရက်နေ့အထိယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့်IEM:Chicago 2019 ပြိုင်ပွဲကတော့ဆုကြေးငွေဒေါ်လာ၂၅၀,၀၀၀အထိပေးအပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Team Liquid, mibr, Team Envy, Renegades, ENCE, G2, Vitality နဲ့Heroic ၈သင်းယှဉ်ပြိုင်ကျမှာဖြစ်ပြီးပွဲစဉ်တွေကိုတော့Twitch မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Weekly Esports Program ကိုပွညျတှငျးပွညျပမှာကငျြးပနတေဲ့တဈပါတျတာ(ဇူလိုငျ၁၉ရကျနမှေ့၂၅ရကျ) အတှငျးဂိမျးပွိုငျပှဲတှကေိုကွညျ့ရှုအားပေးယှဉျပွိုငျနိုငျစရေနျအတှကျသောကွာနတေို့ငျးတငျဆကျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
စုစုပေါငျးUC 100,000 တိတိကိုဆုကွေးအဖွဈပေးအပျသှားမှာဖွဈပွီးအသငျးပေါငျး၁၆၀အထိပဲလကျခံမှာမလို့အောကျပါlink မှာမွနျမွနျစားရငျးပေးသှငျးကပြါစို့ခငျဗြာ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့လကျရှိအကွီးမားဆုံးနဲ့ဆုကွေးအမြားဆုံးPUBG Mobile Tournament ရဲ့Main Event လာပါပွီ။Samsung Galaxy နဲ့Claw Esports တို့ပူးပေါငျးတငျဆကျတဲ့Galaxy Challenge 2019 ကိုတော့လာမယျ့၂၀နဲ့၂၁ရကျနမွေ့နျမာပလာဇာမှာကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ကြှနျတျောတို့Gaming Noodle အဖှဲ့သားတှလေညျးရှိနမှောဖွဈပွီးမွနျမာနိုငျငံအကောငျးဆုံးMobile Legend အသငျး၂၀ရဲ့ယှဉျပွိုငျမှုတှကေိုလာရောကျကွညျ့ရှုဖို့ဖိတျချေါအပျပါတယျ။
မန်တလေးမွို့တျောခနျးမမှာကငျြးပမယျ့Mandalay Electronic Show and PUBG Mobile Tournament ကတော့ဇူလိုငျ၂၆ကနေ၂၈အထိကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။ဆုကွေးငှသေိနျး၄၀ပေးအပျမှာဖွဈပွီးအသငျးပေါငျး၁၅၀အထိစာရငျးပသှေငျးနိုငျပါတယျ။အောကျပါLink မှာမေးမွနျးစုံစမျးနိုငျပါတယျ။
Universities Mobile Esports Championship 2019 ဆိုတာကတော့ရနျကုနျမှာရှိတဲ့တက်ကသိုလျ၁၆ကြောငျးပါဝငျယှဉျပွိုငျမယျ့Mobile Legends နဲ့PUBG Mobile Tournament ပဲဖွဈပါတယျ။ဆုကွေးငှစေုစုပေါငျးဒျေါလာတဈသောငျးပေးမယျ့ဒီပွိုငျပှဲရဲ့Main Event ကိုတော့တက်ကသိုလျတဈခုစီကဂိမျးတဈမြိုးစီအတှကျအသငျးတဈသငျးစီသာတကျရောကျခှငျ့ရရှိမှာပါ။PUBG Mobile အတှကျတက်ကသိုလျတဈခုစီရဲ့Qualifier ကိုတော့“Game Cast Network Myanmar” Facebook page မှာကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
စိနျဂြှနျးCity Mall ကနဦေးစီးကငျြးပတဲ့Mobile Legends ပွိုငျပှဲကတော့ပထမဆု၁၀သိနျး၊ဒုတိယဆု၅သိနျး၊တတိယဆု၃သိနျးပေးအပျမှယဖွဈပါတယျ။အသငျးပေါငျး၆၄သငျးသာပါဝငျခှငျ့ရမှာဖွဈပွီးOnline Qualifier ကိုတော့၂၀နဲ့၂၁ရကျမှာကငျြးပမှာဖွဈပွီးနောကျဆုံး၈သငျးကသာစိနျဂြှနျးCity Mall မှာကငျြးပမယျ့Final Stage ကို၂၇ရကျနမှေ့ာယှဉျပွိုငျရမှာပါ။
MESL ရဲ့Regular Season ကိုတော့ယခုတဈပါတျပွနျလညျစတငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။Dota2, AOV နဲ့MLBB ဂိမျးသုံးမြိုးအတှကျRegular Season ကိုလေးပါတျတိတိယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပွီးWeek2ကိုတော့ဇူလိုငျ၁၉,၂၀,၂၁မှာယှဉျပွိုငျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။MLBB ပွိုငျပှဲမြားတိုကျရိုကျယှဉျပွိုငျမှုကိုတော့“Myanmar Electronic Sports League” မှာကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
Yangon CSGO Network ရဲ့ Premium Tournament Season 1 ကိုတော့ လာမယျ့ ၂၀ နဲ့ ၂၁ ရကျတှမှော ကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။ Prize pool6သိနိးအထိ ပေးအပျသှားမှာဖွဈပွီး Impunity, Blu Gaming, OGN Gaming, Darkside Gaming, Team Fidem, Fox Gaming, Vertical Horizon, Underdog Gaming, Team Illuminati နဲ့ OX Gaming အသငျးတို့ ပါဝငျယှဉျပွိုငျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျပှဲတှကေိုတော့ Yangon CSGO Network – YCN page နဲ့ X-Gaming Page တို့မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
MESL ရဲ့Regular Season ကိုတော့ယခုတဈပါတျပွနျလညျစတငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။Dota2, AOV နဲ့MLBB ဂိမျးသုံးမြိုးအတှကျRegular Season ကိုလေးပါတျတိတိယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပွီးWeek2ကိုတော့ဇူလိုငျ၁၉,၂၀,၂၁မှာယှဉျပွိုငျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။Dota2 ပွိုငျပှဲမြားတိုကျရိုကျယှဉျပွိုငျမှုကိုတော့“Myanmar Electronic Sports League” မှာကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
MESL ရဲ့Regular Season ကိုတော့ယခုတဈပါတျပွနျလညျစတငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။Dota2, AOV နဲ့MLBB ဂိမျးသုံးမြိုးအတှကျRegular Season ကိုလေးပါတျတိတိယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပွီးWeek2ကိုတော့ဇူလိုငျ၁၉,၂၀,၂၁မှာယှဉျပွိုငျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။AOV ပွိုငျပှဲမြားတိုကျရိုကျယှဉျပွိုငျမှုကိုတော့“Myanmar Electronic Sports League” မှာကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။_____________________________________________
ဆုကွေးဒျေါလာ၁၀၀,၀၀၀အထိပေးအပျမယျ့Dota2 Summit ပွိုငျပှဲကိုတော့ဇူလိုငျ၂၅ရကျနမှေ့စတငျကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။Alliance, Complexity, Team Serenity, beastcoast, Pain Gaming, J Storm ၆သငျးပါဝငျကမြှာဖွဈပွီးTI9 ကိုစောငျ့မြှျောနခြေိနျမှာဖြျောဖွမှေုပေးစှမျးနိုငျမယျ့ပွိုငျပှဲပဲဖွဈပါတယျ။
ဇူလိုငျ၁၈ကနေ၂၁ရကျနအေ့ထိယှဉျပွိုငျကစားမယျ့IEM:Chicago 2019 ပွိုငျပှဲကတော့ဆုကွေးငှဒေျေါလာ၂၅၀,၀၀၀အထိပေးအပျသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။Team Liquid, mibr, Team Envy, Renegades, ENCE, G2, Vitality နဲ့Heroic ၈သငျးယှဉျပွိုငျကမြှာဖွဈပွီးပှဲစဉျတှကေိုတော့Twitch မှာကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။